New COVID-19 Health Madhiraivha eEntebbe International Airport Uganda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Uganda Breaking News » New COVID-19 Health Madhiraivha eEntebbe International Airport Uganda
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Uganda Breaking News
Zvichitevera kutangwa kweCCIDID-19 yekuyedza marabhoritari paEntebbe International Airport neMutungamiriri YK Museveni musi wa22 Gumiguru 2021, Hurumende yeRepublic of Uganda yakapa mirairo iri kushanda musi wa27 Gumiguru 2021, kudzamara yaziviswa nezvehutano hweCCIDID-19. Entebbe International Airport.
Vapfuuri vanosvika paEntebbe International vachaongororwa Covid-19 zvisinei nekuti vakabva kupi kana kuti vaccination.
Vafambi vanenge vavhenekwa vanozoendeswa kunzvimbo dzekurapisa.
Vafambi vakave neCCIDID-19 yekudzivirira uye vakabata chitupa vanofanirwa kuramba vachiratidza isina kunaka COVID-19 PCR test setifiketi yakatorwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri ekukwira.
The mirairo inoshanda Gumiguru 27, 2021, kudzamara chimwe chiziviso chapihwa nechiziviso Civil Aviation Authority Uganda, Aeronautical Information Service sezvinotevera:
1. Vese vafambi vanosvika pa Entebbe International Airport achaitwa bvunzo dzeCOVID-19, zvisinei nenyika kwaakabva kana mamiriro ekudzivirira.
2. Vanoregererwa chete ndeiyi:
3. Vapfuuri vanozoongororwa kuti vane COVID-19 kana vasvika vachapihwa rubatsiro rwepfungwa voendeswa kunzvimbo dzinorapirwa dzeveruzhinji nedzakavanzika uko vanozotarisirwa kwemazuva manomwe voburitswa pabvunzo dzePCR dzisina kunaka.
4. Kurapwa kwevafambi mu(3) pamusoro kuchave pachena muzvipatara zvehurumende. Zvakadaro, vafambi vanosarudza zvipatara zvakazvimiririra vanosangana nemari yavo.
5. Panyaya yevashanyi vanosvika, kana vasina zviratidzo kana kuti vane chirwere chakapfava, vanozotarisirwa mumahotera akasarudzwa evashanyi.
6. Vashanyi vari mu(5) pamusoro vanofambira mberi kusvika kuhosha yakakomba vachaendeswa kuzvipatara zvavanoda.
7. Vanosvika vachabhadhara US$30 kana yakaenzana neUganda Shillings yeCOVID-19 PCR bvunzo.
8. Mari inobhadharwa mu(7) iri pamusoro inogona kuitwa pamhepo kana pakusvika pachishandiswa michina yekutengesa, nharembozha, kana mari.
9. Vese vafambi vane tembiricha yemuviri HAISI pamusoro pe37.5° C (99.5°F), havarambe vachikosora, vachitadza kufema, kana zvimwe zviratidzo zvakaita sefuruu vachabvumidzwa kupinda kana kubuda muUganda.
. Izvi hazvibatanidzi nguva yekufambisa pachivako cheterminal.
11. Vafambi vakabaiwa nhomba yeCOVID-19 uye chitupa chekubata vanofanira kuramba vachipa chitupa chekuongorora cheCCIDID-19 chakatorwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kubva panguva yekutorwa kwemuenzaniso kuenda kukwira ndege. Izvi zvinodaro nekuti jekiseni harisi 72% kudzivirira, uye zvinotorawo mazuva / mavhiki akati wandei kuti utange kudzivirira.
12. Vafambi vanenge vachibuda kunze kwenyika vanozodiwa kuti vave nechirwere cheCOVID-19 PCR chakatorwa mukati memaawa makumi manomwe nemaviri kubva panguva yekutorwa kwemuenzaniso. Vanozotevedzera zvinodiwa zvehutano zvekufamba kwenyika kwavanenge vachienda.
13. Vatasvi vanosvika panguva yakatarwa, uye/kana kubva kumatunhu ari mhiri kweKampala vaine tikiti rendege uye pasi pekupinda vachabvumidzwa kuenda kumahotera kana/kana kwavanogara.
14. Vafambi vanenge vasimuka panguva yakatarwa, uye/kana kubva kumatunhu ari mhiri kweKampala vaine tikiti rendege rinoshanda vachabvumidzwa kuenda kunhandare yendege kwavachange vachiratidza tikiti kuvakuru seumboo hwekuenda kunhandare yendege.
15. Vatyairi vanofanira kuva neuchapupu hwokuti vabva kunhandare yendege (zvakadai setikiti rekupakira nhandare yendege kana kuti tikiti repasessanger) kuti vaburuke kana kuti vatakure vafambi.
16. Kutakurwa nemhepo kwezvisaririra zvevanhu kupinda munyika kunobvumidzwa kana zvinotevera zvazadzikiswa:
- Medical Certificate yechikonzero cherufu.
– Kopi yepasipoti/gwaro rechiziviso romushakabvu (Paspoti yepakutanga/gwaro rekufambisa/gwaro rechiziviso rinofanira kusvitswa kuvakuru vezvekubuda kwevanhu munyika) v. Rezinesi rokupinza zvinhu kunze kwenyika/mvumo yokupinza zvinhu kunze kwenyika kubva kuna Director General of Health Services.
- Gwaro richasimbiswa nehutano hwechiteshi uye bhokisi kana rasvika richasvibiswa nehutano hwechiteshi.
17. Kuunza zvitunha zvevanhu munyika mvumo INOFANIRA kuwaniswa kubva kumaMinistries of Health and Foreign Affairs.
Vashanyi vanokurumidza kuteverwa
Kukosheswa kwakaitwa kukurumidza kumhanyisa vashanyi sezvinotevera:
Pakusvika, vashanyi vachaendeswa kunzvimbo yekushanyirwa kwevashanyi uko masampula avo achatorwa kunoongororwa.
Ivo vanozoenderera mberi kunoongororwa kuTourist Lounge uko vamiriri veAUTO (Association of Uganda Tour Operators) uye UTB (Uganda Tourism Board) vanovatarisa, uye vanozobvumidzwa kuenda kumahotera avanoda mukati meEntebbe.
Mhedzisiro yavo inotumirwa netsamba kana WhatsApp, zvichienderana nezviri nyore, mukati meawa 2 1/2.
Vashanyi vanofamba vachafanira kumirira panhandare yendege kuti vaone zvavanenge vawana, kwemaawa anokwana 1 1/2.
Vashanyi vanokurudzirwa kuti bhuku bvunzo yavo pano.